Basa haringomiri nekuti tembiricha inodonha, asi pasina akakwana magirovhosi, zvingave zvinorwadza kupedzisa basa kuchitonhora. Kutenda kuputira, kupfeka isina mvura uye kukuru kuchinjika mune akanakisa magiravhosi ebasa, maturu anotonhora uye zvigunwe zvakaoma hazvizove ...
Kana iwe uchigara munzvimbo inotonhora yemamiriro ekunze, hapana mubvunzo kuti mabhonji kana ngowani dzakarukwa chikamu chakakosha chewadhiropu yako yechando. Asi kunyangwe iwe uchida kupfeka ngowani inodziya kana kuwedzera pfungwa yemafashoni, gore rino (uye makore mashoma apfuura) zvinoita kunge wakapfeka ngowani. Iyo Carhartt Varume's Acrylic Yekutarisa Cap ndeye ...
Vatsvagiri paHarvard University vakaona kuti vanhu vanobudirira vanowanzo kuratidza tsika yekusatevera tsika. Semuenzaniso, munyika yekutengesa kwakakomba, vanhu vanowanzo pfeka masokisi akajeka. Chidzidzo chakadaidzwa kuti "Red Sneaker Mhedzisiro" inoongorora maitiro avanhu kune yakaderera p ...